Madaxweyne Xasan Sheekh oo kusoo laabtay Muqdisho lana filaayo saacadaha soo aadan inuu safar ku tago magaalada Jowhar.
on September 09 2013 Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacaayo oo saacadihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada B/weyne ee xarunta gobalka Hiiraan ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Wafdiga uu horkacaayo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxay kasoo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu u safro magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe, iyadoona qaban qaabada soo dhaweeyntiisa ay halkaasi ka socoto.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii uu gaaro magaalada Jowhar waxaa la filayaa inuu halkaasi kulamo kula qaato mas'uuliyiinta maamulka gobalka Sh/dhexe iyo sidoo kale odayaasha, waxgaradka halkaasi ku sugan.
Warar hoose aynu helnay ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh uu maanta magaalada Jowhar ku tagi doono safar dhulka ah, iyadoona arinkaasi la ogaan doono saacadaha fooda inagu soo haaya.
Wixii kusoo kordha warkaan kala soco wararkeena dambe Insha Allaah.